"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #331
ဤသူသည်ငါ autopilot ကိုချစ်ပြီး ILS အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #333
သူတို့ပတ်ပတ်လည်သွားလာရင်းသွားကောင်းသောအရာ။ အကယ်၍ သူတို့ကပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင်ဆင်းသက်ရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်၎င်းသည်crရာမပျက်ကျသွားနိုင်သည်။
BTW, သင် FB Gh0st ရှိသည်?
"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #335
အဲဒီကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့မည်သို့ပင်ကဲ့သို့မြေယာကြိုးစားနိုင် !? ငါတောင် Simulator ကိုပေါ်စေသည်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ သောလမ်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာရှိသနည်း (တိုင်းပြည်)
"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #336
"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #340
Aeroméxico Connect ကို
ဓာတ်ပုံဆရာ Klaus Ecker
"သည်းခံပါ?"3နှစ်ပေါင်း5months ago #353
Dariussssss ကဒီလိုရေးတယ် -“ သူတို့သွားတာကောင်းတယ်။ အကယ်၍ သူတို့ကပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုတွင်ဆင်းသက်ရန်ကြိုးစားခဲ့လျှင်၎င်းသည်crရာမပျက်ကျသွားနိုင်သည်။
ငါ VA သို့တတယ်
သငျသညျအဲဒီမှာအမြဲသတင်းစကားငါ့ကိုနိုင်နှင့်ဈ ya ကြောင်းလမ်းအကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဦးတည်းပေးလိမ့်မယ်
ဒါဟာကျွန်မရဲ့ sig အတွက်င်
0.200 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်